ဒေါင်းတမာန်: 02/07/2010 - 02/14/2010
NLD မှ ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား 2010 feb 12
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at Saturday, February 13, 20100comments
စစ်တပ်ဆိုတာ ဒါဟဲ့သတင်းမထွက်နိုင်တဲ့တောထဲမှာဆို သာဆိုးသေးတယ် ။
စစ်သားများဝိုင်းရိုက်၍ စားပွဲထိုး ၂ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်
ကျော်ခ | ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၂၃ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမြောက်တပ်မှ စစ်သားများက အုပ်စုလိုက် ရိုက်နှက်၍ ဒဏ်ရာရှိသူ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ စားပွဲထိုးဝန်ထမ်း ၂ ဦးမှာ အရေးပေါ် လူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူနေရသည်။
မန္တလေးတိုင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့အထွက်၌ ပုပ္ပါးတောင်ကလပ်သို့ သွားသည့် လမ်းမကြီးဘေး ဖွင့်ထားသည့် “ဆည်းဆာ” စားသောက်ဆိုင်တွင် ယခုလ ၇ ရက်နေ့ ညဦးပိုင်းက အမြောက်တပ် ၇၀၇ မှ တပ်မှူး အဆင့်ရှိသူ ၂ ဦးနှင့် စားပွဲထိုးများ ပိုက်ဆံမရှင်းသည့်ကိစ္စဖြင့် အချင်းများပြီးနောက် စစ်သားများက လူစုပြီး တကျော့ပြန်လာကာ ဆိုင်တံခါးပိတ် ရိုက်နှက်ခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ရသွားသော မောင်ဝင်းထိန်နှင့် မောင်ဝင်းညွန့်တို့အား မြို့နယ် ဆေးရုံတွင် အရေးပေါ် လူနာအဖြစ် ကုသထားရသည်။
“လာတုန်းက အရပ်ဝတ်နဲ့ လာစားတာ။ စားပွဲထိုးတွေက ဝိုင်းထိုးလို့ ပြန်သွားပြီး ည ၁၀ နာရီခွဲလောက်မှာ စစ်ကားကြီးတစီး အပြည့် အယောက် ၃၀ ကျော် ၄၀ နီးပါး လောက်ရှိတယ်။ အကုန်လုံး စစ်ဝတ်စုံနဲ့ပဲ။ စားနေတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ စားပွဲထိုးလေးတွေကို ထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီး ရိုက်တာ” ဟု မြို့ခံ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အခင်း ဖြစ်ပွားမှုတွင် အမြောက်တပ် ၇၀၇ မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ကြောင်း ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးက အတည်ပြု ဖြေကြားခဲ့သော်လည်း နာမည်နှင့် ရာထူးများအား ဖြေကြားရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ စခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားခြင်း မရှိသေးသလို စစ်တပ် ပါဝင်ပတ်သက် နေသောကြောင့် ရဲက အမှုကို ကိုင်တွယ်ရန် လက်တွန့်နေသည်။
တပ်မ ၇၀၇ မှ တာဝန်ကျ တပ်သားတဦးကလည်း “အဲဒီနေ့က ကျနော် ဂျူတီကျနေလို့ ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ကျနော် အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ တပ်က အရာရှိတွေတော့ သွားကြတာတော့ ရှိတာပေါ့လေ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့နယ်ဆေးရုံ တာဝန်ကျ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတဦးက “ကောင်လေးတွေက ယောက်ကျားလေး ခွဲစိတ်ဆောင်ထဲမှာပါ” ဟု ပြောသော်လည်း အသေးစိတ်ပြောရန် ငြင်းဆိုသည်။
လူနာများကို တွေ့မြင်ခဲ့သူ တဦးကမူ “ အရမ်း ထိထားတာပေါ့။ မျက်နှာနဲ့ ခေါင်းနဲ့ ညိုမဲစွဲပြီး ဖူးရောင်နေတယ်။ လက်မောင်းတွေလဲ ကျေနေတယ်။ အောက်ပိုင်းတွေတော့ ဘာဖြစ်လဲ မသိဘူး” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး ဝင်ရိုက်တာ တခါမှ မရှိဘူးသေးဘူးဗျ။ အခုဟာက အရပ်သားမဟုတ်ဘဲ စစ်ဝတ်စစ်စားနဲ့ ပေါ်တင်ဝင်ရိုက်တာကိုး။ ဒီသတင်းက တမြို့လုံး ဟော့နေပြီ။ ရဲကလည်း တပ်နဲ့ ဖြစ်တာဆိုတော့ မဝင်ရဲဘူး ဖြစ်နေတဲ့သဘောတော့ ရှိတယ်” ဟု သူကဆက်ပြောသည်။
“ဆည်းဆာ” စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်သည် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ရင်းနှီးသူတဦးဖြစ်ပြီး ဆိုင်တွင် စင်တင်တေးဂီတနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များလည်း ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, February 12, 20100comments
အနိစ္စရင်ခွင်တွင် ခိုလှုံခြင်း(သို့ ) ကက်ကင်း ကျော်သူ
ရှိစေတော့...ကိုယ့်ကံနှင့်ကို ကမ္ဘာမြေကြီး ပေါ်ရှိ မြန်မာပြည်ကြီး ထဲသို့ရောက်လာခဲ့ပြီးကိုး။့
မိမိထက်နိမ့်ကျသူများ၊ မိမိထက်မြင့်မားသူများ၊ မိမိနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူသူများ၊ မိမိနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာမတူသူများ၊ မိမိလေးစား သည့်မိတ်ဆွေများ၊ မိမိရွံရှာခဲ့သော ရန်သူများနှင့် အမိမြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား များအပြင် နိုင်ငံရပ်ခြားမှမိမိတို့ မြန်မာပြည်အတွင်း တွင်ဘ၀ပြောင်းသွားသောသူများ...အားလုံး ..အားလုံး...ငြိမ်းချမ်း လှပအဆင်ပြေမှုရှိအောင် အခမဲ့ အသုဘ ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သော နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန်) တည်းဟူသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာအောင် စတင်ဖွဲ့စည်း မျိုးစေ့ချ ပေးခဲ့သော ဘဘ ဦးသုခ၏ကျေးဇူးနှင့် တရားသဘော (အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ)ကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သော အမိမြန်မာပြည်၏ ကျေးဇူးတရားများပင်ဖြစ်တော့သည်။
ပြောင်မြောက်လိုက်သည့်.....်..... အနုပညာရှင်
ထူးချွန်လိုက်သည့် ........ အနုပညာရှင်
ယခင် အနုပညာလောကမှာ လှုပ်ရှားမှုများက.......... အတ္တဟိတ။
ယခင်နှင့်ယခု ကွာခြားလှသည်.....။ မိမိ၏ ရင်ထဲ၊ နှလုံးသားထဲ၊ ဦးနှောက်ထဲ ယခုပေါ်ပေါက်လာသည့် ပီတိ၊ ရင်ခုန်မှုအပျော်တို့သည် မိုးနဲ့မြေဖြစ်ခဲ့ပါပြီ ဘဘဦးသုခပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ ဆုံးမခဲ့ဖူးပါသည်။
အေး.....အဲ့ဒါပဲကွ..အနုပညာသည်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။ စစ်မှန်တဲ့အနုပညာသည်ဆိုတာ လူတိုင်းလေးစားတယ်။
ဒါကြောင့် ထိုအချိန်မှစ၍ မိမိသည်....အသက်မရှိသူတို့နှင့်သာ ပတ်သက်သွားတော့သည်။
ထို့ကြောင့်- မိမိ၏ အနုပညာနှလုံးသားကို ငြိမ်းချမ်းမှုအတွက် စတေးပစ်လိုက်တော့သည်။
ထိုအခါ...မိမိ၏ဦးနှောက်ထဲ ဖျတ်ခနဲပေါ်လာ၍ ဆတ်ခနဲပြန်ပြောမိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်.... မောင်မောင်(ကျော်ဝင်း) ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက် ကမ္ဘာမြေပြင်ကိုရောက်လာပြီး “ကျော်သူ” ဟူသော အမည်နာမနှင့် ဘ၀ဘ၀တွေကို ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်တဲ့ အချိန်မှစပြီး ပေးဆပ် လိုက်ရတဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေ....“ကက်ကင်း”ကိုက်ပြီး သင်္ချိုင်းမြေနှင့် အကျိုးပေးခဲ့ရသည်မှာ ယနေ့တိုင်....။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Thursday, February 11, 20100comments
ရန်သူ . . . ။
အပေါ်က ရန်သူကို အောက်သို့ရောက်လာအောင် ဖျားယောင်း၊ အောက်က ရန်သူကို အပေါ်သို့ရောက် လာအောင် မြူဆွယ်၊ အရပ် (၈) မျက်နှာက ရန်သူများကို တည်ကြက်လုပ်ပြီး ကျုံးသွင်း၊ စသဖြင့် . . . ဖျားယောင်းခြင်း၊ မြူဆွယ်ခြင်း၊ ကျုံးသွင်းခြင်း၊ မှိုင်းတိုက်ခြင်း၊ ချောင်ပိတ်ခြင်း၊ ထောင်ခြောက်ဆင်၍ ရန်သူကို အမိအရဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ လုပ်ရန် အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
ရန်သူတို့သည် ကျွန်တော်၏ ပစ်မှတ်အတွင်းသို့ ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော်၏ သွေးသောက်များ၏ အင်အားတစ်ရပ်ထဲနှင့် ထိုရန်သူတို့ကို နှိမ်နှင်း၍မရ။ အများအား၊ ပြည်သူ့အားနှင့် တက်ညီလက်ညီ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ သစ္စာသွေးသောက်ပြီး ရဲရဲတောက် နှိမ်နင်းမှရမည့် ရန်သူပင်ဖြစ်သည်။
ဤရန်သူသည် . . . မာယာများသည်။
ဤရန်သူသည် . . . ပရိယာယ်ကြွယ်ဝသည်။
ဤရန်သူသည် . . . ကလိမ်ကကျစ်ကျသည်။
ဤရန်သူသည် . . . အတ္တကြီးသည်၊ ရက်စက်သည်။
မိုးလုံးပြည့်မုသာဝါဒသုံးသည်၊ သွေးထိုးတတ်သည်၊ သပ်ရှိုတတ်သည်၊ အကောက်ကြံတတ်သည်။
လူမျိုးတုံးအောင် လုပ်မည့်ရန်သူ၊ အမျိုးဖျက်မည့်ရန်သူ၊ သာသနာဖျက်မည့်ရန်သူ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သည့်ရန်သူ . . . မည်သို့သော ရန်သူဖြစ်စေကာမူ . . . ကျွန်တော်တို့စည်းလုံးမည်၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမည်။ လက်တွဲမဖြုတ်၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိမည်ဆိုပါက ချေမှုန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ နှိမ်နင်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ကျုံးသွင်းခြင်းစသည့် စကားလုံးများကို သုံးခြင်းမှာ ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်နေခြင်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးလှုံဆော်စာလည်း မဟုတ်၊ အရေးအခင်းဖြစ်အောင် လုပ်မည့်သူမဟုတ်၊ ဆူပူနှောက်ယှက်မည့်သူမဟုတ်။
ကျွန်တော် . . . နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်။
ကျွန်တော် . . . လူမှုရေးသမား။
ကျွန်တော် . . . နိုင်ငံရေးကို မသိ။
ကျွန်တော် . . . လူမှုရေးသမားသာ သိသည်။
သို့သော် . . . နိုင်ငံရေး ကောင်းလျှင် လူမှုရေးသမားများသက်သာမည်၊ နိုင်ငံရေးညံ့လျှင် လူမှုရေး သမားများ ပင်ပန်းမည် ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးဆိုသည်မှာ ရိုးစင်းသည်။ ဖြူစင်သည်။
သို့သော် . . . ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်၊ ရိုးသား၊ တည်ကြည်၊ ငြိမ်းချမ်းသော လူမှုရေးလုပ်ငန်းကို အမဲဆိုး၊ (အနက်ရောင်ဆိုး) မည့် ဒိဋ္ဌိအယူဝါဒသမား၏ ဖျက်ဆီးမှု၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ နှောက်ယှက်မှုများရှိနေသည်။ သူတို့ . . . သူတို့သာလျှင် ငြိမ်းချမ်းမှုကို ဖျက်ဆီးမည့် ဘုံရန်သူဖြစ်တော့သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်ရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော်ရိုးသားစွာ အဖြူထည် လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို တင်ပြခဲ့ဘူးပါသည်။ ကုသိုလ်ယူရမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်များပွားများရေး၊ ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄) ပါးလက်ကိုင်ထားရေး၊ သီလလုံရေး၊ အယူသည်းမှုပပျောက်ရေး၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသူများအကြောင်း . . . များစွာ၊ များစွာ ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။
(ဥပမာအားဖြင့် . . . တဏှာ့ကျွန်မခံပြီ၊ အခမဲ့ ကိုယ်ထည်၊ ရိက္ခာ၊ ခုတ်မယ် . . .ထစ်မယ် . . .ပါးပါးလှီးမယ်၊ နယ်ကျွန်ထွက်ပေါက်၊ သေသောသူသည် သုဿန်သို့ သက်သက်သာသာ သွားသင့်သည်၊ လှူမယ် တန်းးမယ် သာသနာပြုမယ်၊ မသေဆေးစားကြသူများ . . . စသဖြင့် နောက်ဆုံး . . . (အမွေ၊ ကတ်ကင်း၊ နှင့် ရှင်းတမ်း) တို့ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ပြည်သူပြည်သားများနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများသည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူဝါဒသမား၏ အယူစွဲ၊ အမှားစွဲ၊ အယူသည်းမှုများကို သိရှိပြီးဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ရန်သူကို မြင်နေရပြီဖြစ်သည်။ ထိုရန်သူတို့၏ ပရိယာယ်ကြွယ်မှု၊ သပ်ရှိုမှု၊ ဖြားယောင်း သွေးဆောင်မှု၊ လက်တွင်းသို့ မရောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ အထူး သတိထားရမည်။ စိတ်ဓာတ် တို့ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ကာ ရဲရဲရင့်ရင့်တွန်းလှန် တိုက်ဖျက်ရတော့မည်။ ရန်သူအား အမြစ်ပါမကျန် တိုက်ခိုက်ရတော့မည်။
ပစ်မှတ်ကို သိလျှင် ထိအောင်ပစ်ဖို့က မိမိတို့ တာဝန်ပင်ဖြစ်တော့မည်။ မိမိတို့၏ ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပ မှာရှိတဲ့ ကိလေသာဟူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒ ရန်သူတို့ကို ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိသည့် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများက စည်းလုံးညီညွတ် လက်တွဲမဖြုတ် စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်၊ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ရန် အချိန် ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါမှ . . . “ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့” ဟု ရင်ကော့၍ မော်ကြွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် လူမှုရေး လုပ်ကိုင်ပါသည်။ အများကတော့ ကျွန်တော်သည် ကုသိုလ်တွေ အများကြီးရနေပြီဟု ထင်ကြပါသည်။ သို့သော် . . . ကျွန်တော်သည် ကုသိုလ်တစ်ပဲ . . . ငရဲ တစ်ပိဿာ ရနေပြီ ဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်တော် လုပ်နေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ချက်များသည် အများအကျိုးအတွက် ထမ်းရွက်လုပ်ဆောင်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဤကောင်းမှုလုပ်ငန်းကြီးတွင် နှောင့်ယှက်သူ၊ ဟန့်တားသူ၊ တားမြစ်သူ၊ ဖျက်ဆီးသူမှန်သမျှကို လေလှိုင်းမှ တစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း၊ စာပေထက်မှသော် လည်းကောင်း၊ FACEBOOK မှသော်လည်းကောင်း၊ ကာယကံ၊ ဝဇီကံ၊ မနောကံတို့ဖြင့် ပြန်လည်ဖြေရှင်း တုန့်ပြန်မှုများကို လုပ်ခဲ့ရသည်ဖြစ်၍ အကုသိုလ်များပင် ရခဲ့သည်။ အပယ်သို့ လားတော့မည်လား . . . မသိ။
သို့သော် ကျွန်တော် တို့၏ ဖခင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ပြည်သူ လူထုအား ပြောကြား ထားသော စကားစု အရ . . .
“သုဂတိသွားရာ တံခါးပေါက်သည် မည်မျှပင် ကျဉ်းမြောင်းသည် ဖြစ်စေ ယမမင်း၏ ခွေးရည် ပုရပိုက်၌ ငါ၏ အပြစ်တွေ မည်မျှပင် ရေးမှတ်ထားသည် ဖြစ်စေ ငါကားဂရုမပြု” ဟူသော စာပိုဒ်သည် ကျွန်တော့် အတွက် မဟာ အားဆေး တစ်ခွက်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဘုံရန်သူ ဖြစ်သော အယူမှား၊ အစွဲမှား၊ ဒိဋ္ဌိဝါဒများအား သိရှိပြီးသည်နှင့် အညီ ကျွန်တော်တို့၏ သတ်ကွင်းထဲသို့ ဝင်ရောက်နေသော ရန်သူတို့ကို ဇွဲရှိရှိ၊ သစ္စာရှိရှိ ဥမကွဲ၊ သိုက်မပျက်၊ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ တိုက်ခိုက်တွန်းလှန် ဟန့်တားကြမည်ဆိုပါက ငြိမ်းချမ်းသာယာ စိုပြည်လှပသော လူ့ဘုံတစ်ရပ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်၊ နေချင်ဖွယ် ကမ္ဘာကြီး တစ်ခု တည်ဆောက် နိုင်တော့မည် ဖြစ်ပါကြောင်း . . . ။
ရ၀ကျော် သေခါနီးပေမဲ့ မိုက်နေတဲ့ လူတွေရှိတယ်။
အာဏာရှင်အကြိုက် ခွေးလိုအူနေသူတွေ ရှိတယ်..
အတ္တ မောဟ ဒေါသမရှိသော..
သင်၏ သမိုင်းသည် ဖြူစင်အတိ..
အနုပညာသည် သင် ဒါရိုက်တာလုပ်မှမဟုတ်
အနုပညာသည် သင် ကဗျာရေးမှမဟုတ်
အနုပညာသည် သင် ပန်းချီဆွဲ မှမဟုတ်
ပူဆွေးသူကို ယုယစွာ ပွေ့ ဖက်
နာကြင်သူ သို့ ဆေးအလှူလက်
ကြင်နာပါ သော အပြုံး..
သင်သည် ပြည်သူချစ်သော အနူပညာရှင်…
ပြောချင်သူ ပြောပစေ..ကျော်သူ စဏ္ဍာလ..
ကဲ့ရဲ့ချင်သူ ကဲ့ရဲ့ပစေ..ကျော်သူ လူမိုက်.
မခေါ်မပြောနေပစေ ..မှန်ရာကို ဦးစိုက်..
အသက် (၅၁)..သင်ဘ၀ လူဖြစ်ကျိူးနပ်ခဲ့ပြီ…
သာဓု သာဓု သာဓု ကိုကျော်သူ..
သင်ပြုသော ကုသိုလ်ရေ တစ်စက်…
အာဏာရှင်ပေါ် ဖြန့် ကျက်တယ်..
ရှင်းသန့် သော သင်၏ မည်နာမ…
စံတုနှိုင်းမရ. ရှင်သန့် အသက်ဝင်..
သင်သည် ပြည်သူ့ ချစ်သော စေတနာရှင်…
သင်၏ သားသမီး စိန်မစီလည်း တင့်တယ်သည်။
သင်၏ ဇနီး..သင့်အတွက် ပီတိလွှမ်းတော့သည်။
ဖြစ်လေရာ ဘုံဘ၀..ကံသာလျှင် သင့်၏နောက်လိုက်ဖြစ်တော့သည်။
သင်၏ စေတနာသည် မသေ…
သင်၏ မေတ္တာသည် မသေ..
သင်၏ အနုပညာသည် မသေ…
နှလုံးခုန်ခဲ့သော အသက် ၅၁…
ကောင်းသော မွေးနေ့ ပါ သူငယ်ချင်း
မင်းရဲ့ မွေးနေ့ မှာ
စေတနာရှင်..အနုပညာရှင် ကိုကျော်သူ၏ ၅၁ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ သို့ ..
ဂုဏ်ယူပါတယ် သူငယ်ချင်း..မင်း၏ တုနှိုင်းမရ ဂရုဏာ..စေတနာ နှင့် မေတ္တာ
အဖေပြောခဲ့ တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်နှင့် ဖာနိုင်ငံ
ဗိုလ်ချုပ်က သူ့ မွေးနေ့ သူသတိရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်ပြည်မှာသူလုပ်ချင်တာတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေရင်း လုပ်ကြံခံခဲ့ ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကို ဗမာပြည်တွင်သာမက အာရှတခွင်မှာ တန်ခိုးအရှိန်ကြီးခဲ့ တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမိုင်းကို မှေးမှိန်အောင် ပယ်ဖျောက်ဖို့ ကြိ်ုးစားနေကြတဲ့ လက်ရှိ စစ်အကြမ်းဖက် ခွေးအုပ်စုတို့ အား အော့နှလုံးနာမိပါတယ်။ အဖ အောင်ဆန်း ရယူခဲ့ တဲ့ တိုင်းပြည် ယ္ခုလက်ရှိမှာ စစ်ခွေး တွေရဲ့ ကိုယ့် အမျိုး ကောင်းစားရေး ကိုယ့် အာဏာလက်လွတ်မဆုံးရှုံးရေး ကလွဲ ရင် ပြည်သူ့ အကျိုးအတွက်ဘာမှကို ပြန်မကြည့်ဘဲ ရက်ရက်စက်စက် အုပ်ချုပ်ခံနေရတာ ထက် အင်္ဂလိတ်လက်အောက်မှာကျွန်အဖြစ် နေရတာက သာ၍ကောင်းသေးတယ်လို့စိတ်ထဲ တွေးဖြစ်မိပါတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လောလောဆယ်မှာ စစ်ခွေးတွေလက်အောက်မှာ ကျွန်ခံရင်း မ၀ရေစာစားနေရတာထက် အင်္ဂလိတ်ခေတ်တုန်းက ကျွန်ဘ၀ရောက်ခဲ့ ပေမယ့်ယ္ခုလက်ရှိ ဘ၀ထက်တော့သာသေးတယ်လို့ ။
လိုင်စင်ရ ဓါးပြသာသာ စစ်ခွေးသူတောင်းစားများ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, February 10, 20100comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at Wednesday, February 10, 20100comments
NLD မှ ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနား 2010 feb...
စစ်တပ်ဆိုတာ ဒါဟဲ့သတင်းမထွက်နိုင်တဲ့တောထဲမှာဆို...
အနိစ္စရင်ခွင်တွင် ခိုလှုံခြင်း(သို့ ) ကက်ကင်း ကျော်...
အဖေပြောခဲ့ တဲ့လွတ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်နှင့် ဖာနိုင်...
ငါတို့ ပြည်သူများအတွက် ကူညီဝိုင်းကြ ( အလုပ်သမားသပိ...